Fahafatesana ankizy vavy :: Mpampianatra ahiana ho namono ny mpianany sady voalaza fa sakaizany • AoRaha
Natao famotorana sy voatery notazonina ny lehilahy iray voalaza fa mpampianatra amina lisea any Befandriana Avaratra voarohirohy tamin’ny faha- fatesana ankizivavy iray, enina ambin’ny folo taona. Hita faty tany anaty lohasaha lavidavitra ny tanàna io ankizivavy io, ny harivarivan’ ny talata lasa teo. Ity lehilahy mpampianatra ity no noahiana voalohany ho tompon’antoka tamin’izany. Voasambotra izy ary nalefa notazonina any Mandritsara, mialoha ny hanolorana azy amin’ny Fitsarana.
Nanaitra ny olona ny fahenoana fofona ratsy tao anaty alaala miala kely ny tanànan’i Befandriana Avaratra amin’ny lalana mihazo an’i Mandritsara. Nisy fatin’olona iray hita teo am-bodihazo. Efa simba tsy nisy nahafantarana azy intsony ny razana. Tsy fantatra ny endriny. Ny fizahana nataon’ ny mpitsabo no nahalalana fa vehivavy ity hita faty, taorian’ny fizahana ny taovam-pananahany.
«Nisy kapa teo akaikin’ ny razana. Izany no namantaran’ny fianakaviany azy. Ankizivavy mpianatry ny lisea, nokarohina efa dimy andro lasa, ity hita faty ity», araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.
Voalaza fa efa niezaka nitady an’io ankizivavy io teo an-tanàna ny fianakaviany, hatramin’izay tsy nahitana azy izay. Tsy mbola nahazo tatitra avy amin’ ny mpitsabo milaza ny antony nitarika ny fahafatesan’io ankizivavy io ny mpanao famotorana. Nantsoina sy nohenoina teny amin’ny kaomisarian’ny polisy ny fianakaviana mana-manjo. Fantatra, taorian’ny angom- baovao rehetra, fa nisakaiza tamina lehilahy, manodidina ny efapolo taona, mpampi- anatra ao amin’ny lisea nianarany ilay ankizivavy, fony fahavelony. Niantefan’ny ahiahy tamin’ ity raharaha ity ilay mpampianatra. Milaza ny polisy any an-toerana fa
« ho fisorohana ny mety ho fihoaram-pefy toy ny fitsaram- bahoaka no antony nitondrana an’ilay voarohirohy any Mandritsara ».
Lalam-baovao Tsarasaotra :: Mpitondra môtô tra-doza navotan’ ny manamboninahitra ambony iray
Fanafihana tetsy Ankorondrano :: Mpirahalahy niara-nogadraina eny Tsiafahy